आजको समयमा आइपुग्दा पनि सहज छैन हामी जस्तै समलिङगी जोडीहरुलाई सहज तरिकाले जिवन बिताउन ‘सुवास्ना गुरुङ’ - MitiniNews :- Nepali News Portal | Information
Home/जीवन शैली/आजको समयमा आइपुग्दा पनि सहज छैन हामी जस्तै समलिङगी जोडीहरुलाई सहज तरिकाले जिवन बिताउन ‘सुवास्ना गुरुङ’
आजको समयमा आइपुग्दा पनि सहज छैन हामी जस्तै समलिङगी जोडीहरुलाई सहज तरिकाले जिवन बिताउन ‘सुवास्ना गुरुङ’
समय संग सङघर्ष गदै
सुवास्ना गुरुङ, लेसवेयन
बि.स. २०४९ साल, कास्कीको धान्दुक वडा नं. ३ मा सुवास्ना गुरूङको जन्म भएको थियो । आमा बुवा सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने भएकाले परिवारलाई जेनतेन चलाउदै अगाडी बढीरहनु भएको थियो । परिवारको दशौ सन्तानको पनि कान्छि छोरीको रुपमा सुवास्नाको जन्म भएको थियो ।भाइ बहिनीलाई पढाउने र हुर्काउने सबै जिम्मेवारी मेरो ठुलो दिदीले लिनुभएको थियो । दिदीले चिया पसलबाट होटल चलाएर हामी सबैजनाको दैनिकी जसोतसो चलिरहेको थियो । आमा बुवाका र दिदी सबैजना होटल व्यवसायमा व्यस्त रहने भएका कारण मैले आफ्नो पढाईलाई निरन्तरा दिइरहोस भनेर परिवारले मलाई होस्टेलमा राखेर पढाउन थाल्नुभएको थियो ।
विशेष गरी सार्वजनीक विदाका दिन म होस्टेलबाट घर आउँदा मेरो मन खिन्न हुन्थ्यो । एक त घर परिवार संगसंगै बस्न नपाएर सानैदेखि टाढा बसेर अध्ययन गनुपरयो । त्यसमाथी पनि परिवारको आर्थिक अवस्था सामान्य भएका कारण सबैजना दुईछाक जोहका लागी व्यस्त हुने गर्नाले मैले परिवारको माया पाउन सकिन र परिवारबाट नजिक हुनुको साटो टाढा हुदै गए ।
म एक्दम एक्लो हुन्थे र मैले आफुसंगका हरेक कुराहरु मनका बह पोख्न, मनका उब्जीएका कुराहरु खोल्न परिवार संग नपाउदा म परिवारसंग घुलमिल हुनु भन्दा अरुसंग नजिक, मेरो मनले भनु या मेरो त्यस समयको परिस्थतीले बनाउदै गयो । म परिवारसंग टाढा हुदै जान थाले ।
समय संग चल्दै गर्दा बिस्तारै–बिस्तारै म घरपरिवार भन्दा पनि आफु संग पढ्ने साथीहरुसंग नजिक हुदै गए । हरेक मेरो कृयाकलापहरु केवल साथीहरुसंग मात्र सुनाउने गर्थे । उनीहरुपनि दंग परेर सुन्ने गर्थे । यसरीनै मेरो दिनहरु बित्दै गयो ।बास्केटबलमा एकदम रुची राख्ने म विद्यालयबाट प्रतिनिधीत्व गरेर खेल्न जादा प्रथम स्थान हासील गरेर आउने र पुरस्कार हातमा पर्दा अझै राम्रो गर्छु भन्ने अठोट मनमा बसेको हुन्थ्यो ।
२०६६ सालमा एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास गरे । मैले जिवनको एउटा बसन्त पार गरी दोश्रो बसन्तमा प्रवेश गर्न पाउदा म एकदम खुसीले गदगद भएको थिए । मेरो जिवनको एउटा यस्तो समय आयो मैले अब कुन बाटो रोज्ने, आफ्नो जिवनलाई कता तिर डोराउने यि सबै कुराको उत्तर मैसंग थियो र कक्षा १२ भर्ना हुदा मैले आफ्नो रुची अनुसारको पढाई होटेल म्यानेजमेन्ट पढन मन थियो, परिवारलाई सुनाए तर परिवारले स्र्विकारनु भएन ।
आफ्नो इक्छा विपरीत नर्सिङ पढन लगाउनु भयो । इक्छा विपरीत गरिएको कुनै कुराहरु दिगो रहदैन भने जस्तै मेरो जिवनमा पनि यस्तै भयो । मैले अध्यनलाई पुरा नर्गदै बिच बाटोमा बिर्को लगाउन बाध्य भय र परिवारको सहयोग बिना केही सम्भव थिएन आफ्नो रुची बास्केटवललाई पनि निरन्तरता दिन सकिन । म सबैबाट एक्लो, के गर्ने कसो गर्ने, मेरो जिवनको गन्तब्य के हो आफै अन्यौलमा थिए ।
जिवनमा आफुले सोचे जस्तो गर्न पाइयो न त जिवनमा परिवारले सोचेजस्तो बन्न सकियो । त्यतिबेला सारै दुखी अनि चिन्तीत बन्न पुगे । समयको खेल भनु या के भनु । म आफुले आफैलाई प्रश्न गर्थे । के गर्ने कसो गर्ने एक्दम अन्यौलता थियो मेरो जिवनमा । भविश्यको चिन्ताले दिनरात खाइरहेको थियो । आफुलाई सहयोग गर्ने, आफ्नो मनको बह पोख्ने ठाउँहरु कतै नदेखिदा आखा खोलेर पनि चिम्लीए जस्तै चारैतीर अन्धकार मात्र थिए मेरो जिवनमा केवल अन्धकार मात्र ।
एकदिनको कुरा हो । समय संग सबैको जिवनमा आशाको नया किरण पलाउछ भनु या प्रत्येक रातपछिको उज्यालो दिनले नया आशाको किरणको टुसो बोकेर आय जस्तै भयो मेरो जिवनमा । शारिरीक रुपमा फिट हुन गयको स्थानले मेरो जिवनको भविश्यको निर्धारण गरिदियो । म जुम्बाको प्रशिक्षक भएर निस्कीए । त्यसदिन मेरो खुसीको सिमानै रहेन । जिवनले के कसरी कस्तो घुम्तिहरु निम्ताउछ पतै नपाइदो रहेछ । समयसंगै चल्ने क्रममा मेरो जिवनमा पनि यस्तै भयो ।
मितिनी फिनेटसमा जुम्बा सिकाउदै, सुवास्ना
दिनहरु बित्दै गयो । म हरेक दिन सबेरै उठेर जुम्बा जान्थे । धेरै जनाको म प्रशिक्षक बन्न पुगे । सिक्न आउनेहरुमा पनि एकजना मेरो लागी अलि स्पेशल भनु या मेरो प्रिय बन्न पुगीन । उनको नाम थियो श्रदा अरु भन्दा भिन्न स्वभावकी उनि म उनिसंग बोल्न र नजिक हुन पाउदा एकदम खुसी हुन थाले म । दिनहरु बित्दै गयो । बिस्तारै हाम्रो भेट जुम्बामा दिनानुदिन हुदै गयो । पातलो भेट हाम्रो बाक्लीदै गयो । हामी एक अर्काको नजिक बन्न पुग्यौ । हामी दुई संगै हुदा अरु कसैको आवश्यकता पदैन थियो । हाम्रो नजिक भनेको साथी भन्दा माथी भैसकेको थियो । एक अर्कालाई हामी दुई मन पराउन थालीसकेछौ । समय संगै दुबैजना एकअर्का बिना बाच्न नसक्ने अवस्था हामीमा भैसकेको थियो ।
मनमा कता कता एकदम डरले डेरा पनि जमाइरहेको थियो । घर परिवार र समाजले हाम्रो सम्बन्ध स्विारकर्न सम्भव थिएन । आफु महिला भएर अर्को महिलालाईनै आफ्नो जिवनसाथी बनाउनु भनु या जिवनभर उसैसंग बस्छु भनेर निर्णय लिनु जो कोहीको हकमा सहज थिएन र हुदैन पनि थियो हाम्रो समाजमा । म मा पनि यस्तै भयो । सबैसंग लुकेर भेट्ने आफ्नो मनको कुराहरु एक अर्कामा पोख्ने गर्दथ्यौ । परिवारले रोक्न खोज्दा पनि हामीले हामीदुईको सम्बन्धलाई टिकाउन सफल भैरहेका थियौ । हाम्रो दिनहरु बितीरहेका थिए ।
सुवास्ना,श्रदा गुरुङ, समलिङगी जोडी
एकदिनको कुरा हो । परिवारको कारण श्रदा युके जाने निर्णय भयो । त्यो खबर सुन्दा म छागाबाट खसेको जस्तो भए । के गर्ने, कसो गर्ने म मा एकदम अन्यौलता आयो । उसको परिवार सबैजना युकेमा नै बस्दै आउनु भएको थियो । श्रदा लामो समयदेखि परिवारबाट टाढा भएर बसिररहेकी थिइन । उनले परिवारको कारण युके जाने तयारी गदै थिइन । परिवारसंग भेट्न पाउदा उनको अनुहारमा एकदम खुसी प्रष्ट देखिन्थो । तर कता कता आफु संग टाढा हुने हो की भनेर मेरो मनले मनलाई खान थाल्यो । उनको भिसा आयो । हामी दुई त्यसदिन एक अर्काको अंगालोमा कसिएर एकदम रोयौ र अन्नत श्रदालाई मैले युकेको लागी बिदाई गरेर फर्किए ।
आफुले माया गरेको मानिससंग टाढिएर बस्न एकदम गारो हुन थाल्यो मलाई । घण्टौ फोनमा हाम्रो कुराकानी हुन्थ्यो । श्रदाले परिवारलाई हामी दुईको सम्बन्ध बताउन धेरै प्रयास गर्दा पनि उनि सफल भइन्न र उनी नेपाल फर्किइन । म एकदम खुसी भए । जब श्रदा नेपाल आइन उनको बाबा पनि केही समय पछि नेपाल आउनु भयो । किन फर्किएको के भयो । इत्यादी कुराहरुले एकदम उनमा दबाब हुन थाल्यो र दुबैजनाले आफ्नो सम्बन्धको बारेमा भन्ने ठुलो निर्णय गरेम र परिवारलाई सबै कुरा बतायौ ।
हाम्रो कुरा सुनेपछि बाबा छागाबाट खसेजस्तो हुनुभयो । उहाले विश्वास गर्नु भएन । दिदि बहिनीको सम्बधलाई तिमीहरु के भन्दै छौ । विभिन्न गाली गलोज हामीमाथी प्रहार भयो । परिवारले स्विकारनु भएन । भेटन हामीमा रोक लगाइयो । उनलाई सुधारकेन्द्र देखी उसको परिवारले सकेसम्म सबै खाले उपचार गर्न बाकी राख्नुभएन । हामी विभीन्न खाले सहयोगका लागी ढोकाहरु ढक्ढकाउन थाल्यो । यसरी परिवारलाई आफ्नो यौनिकता बारे बताउदा परिवारले स्विकार गर्न नसकेको समय र हामी दुई एक अर्काबिना बाच्न नसकेको अवस्थाले गर्दा अन्नत हामी दुई घरपरिवार सबै छोडेर परिवारको स्विकारर्यता बिनानै काठमाण्डौ प्रस्थान गरयौ ।
यौनिक तथा लैङिगक अल्पसङख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुको हक अधिकारको वकालत गदै आएको संस्था मितीनी नेपालको सम्पर्कमा हामी आइपुगेम र उहाहरुको सहयोगमा हामी संरक्षित भएर आफ्नो दिनहरु बिताउदै जान थाल्यौ ।
बिस्तारै हामी जस्तै ब्यक्तिहरुको हकअधिकारको लागी काममा जोडीने अवसर पनि प्राप्त गरयौ । परिवारले हाम्रो यौनिकताको कारणले आजको दिनमा हामीलाई स्विकार नगरेता पनि भोलिको दिनमा अवश्य पनि स्विकार गर्नु हुन्छ भन्ने ठुलो विश्वासका साथ अगाडी बढिरहेका छौ । हिजोको दिनमा आफ्नो यौनिकताको कारणले परिवारबाट टाढा बस्न परेको हामी जस्तो जोडी भोलीका दिनमा अरु जोडीहरुको प्रेरणाको श्रोत बन्न सकुम भन्दै हक अधिकारको लागी पैरवी गदै हिडीरहेका छौ । हिडीरहनेछौ ।
मितिनीसँग मनका कुरा देशभर
३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०४:४६
समलिंगी सँग कुराकानी
१७ असार २०७६, मंगलवार ०९:५३
कुशे औशी तथा बाबुको मुख हेर्ने दिन
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार ०७:३५